Bayern Munich Oo Tixgalineysa Inay Dalab Rikoor Ah Ka Gudbiso Pedri
HomeWararka CiyaarahaBayern Munich oo tixgalineysa inay Dalab rikoor ah ka gudbiso Pedri
November 23, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda Bundesliga ka dhisan ee Bayern Munich ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay dalab rikoor ah ka gudbiso xiddiga Barcelona Pedri .
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee 18 jirka ah ayaa qandaraas cusub oo waqti dheer ah u saxiixay kooxda reer Catalan bishii Oktoobar, kaasoo ay ku jiraan €1bn (£ 842m) oo lagu burburin karo qandaraaskiisa.
Si kastaba ha ahaatee, AS ayaa ku warameysa in Bayern ay xiiseyneyso saxiixa Pedri, wakiillada ciyaaryahankana ay ka warqabaan rabitaanka kooxda Jarmalka ee ku aadan saxiixiisa.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in kooxda heysata horyaalka Bundesliga ee Bundesliga ay diyaar u tahay inay da’yarka tayada leh ka dhigaan ciyaaryahanka ugu qaalisan taariikhda kooxda, iyagoo soo bandhigaya dalab ka badan €80m (£67.3m) oo ay ku soo iibsadeen daafaca Lucas Hernandez 2019kii.
Bayern ayaa dooneysa inay wax ka weydiiso Pedri bisha Janaayo ama xagaaga soo aadan, inkastoo u dhaqaaqista suuqa jiilaalka loo arko inay yar tahay.
Pedri, oo ku guuleystay abaalmarinta wiilka dahabiga ah ee 2021 isniintii, ayaa 56 kulan u saftay Barcelona tan iyo markii ugu horeysay ee uu saftay Sebtember 2020, sidoo kale 10 jeer ayuu u saftay xulka qaranka Spain.